“အတွေးစလေးတွေ”: ဆရာများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုဆိုင်ရာတိုးတက်မှု . . .
ဆရာများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုဆိုင်ရာတိုးတက်မှု . . .
Dec 21, 2009 Barbra Abromitis
ရာသီအလိုက်ကျောင်းပိတ်ရက်များ၊ ပညာသင်နှစ်ဆုံးကျောင်းပိတ်ရက်များတွင် ဆရာများသည် မိမိကိုယ်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်များ ကုန်ဆုံးယုတ်လျော့ကုန်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်သည်။
ဆရာများသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကျောင်းဖွင့်ရက်တိုင်းစင်မြင့်ပေါ်တက်၍စာသင်နေရသည်ဟု ခံစားရနိုင်သည်။ ကျောင်းသားများကို စိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြွနေစေပြီး သင်ယူမှုတွင် စိတ်ပါဝင်စားစေရန်ကြိုးစားရခြင်းသည် ဆရာများအတွက် မဖော်ပြနိုင်အောင်များပြားသော စွမ်းအင်များကို သုံးစွဲရသည်။ စာသင်ကြားရာတွင်ကြုံတွေ့ရသောဖိအားများတွင် သင်ကြားမှုအချက်အလက်များစုဆောင်းရခြင်း၊ စာရင်းဇယားများပြုစုရခြင်း၊ အစီအစဉ်များချမှတ်ရခြင်း၊ စာမေးပွဲများစစ်မေးရခြင်းစသည်တို့ပါထပ်ပေါင်းလိုက်သောအခါ ဆရာတစ်ယောက်တွင် အနားယူအပန်းဖြေချိန်၊ မိမိကိုယ်ကို ခေတ်မီတိုးတက်စေရန်
ပြုစုပျိုးထောင်ချိန်၊ အကောင်းဆုံးညွှန်ကြားချက်များပေးနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ချိန်များလျော့နည်းလာလေ့ရှိသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများရှိအောင် စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးစားခြင်းက ဆရာများကို တက်ကြွလန်းဆန်းစေရုံသာမက တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအားနှင့် သင်ကြားမှုနည်းဗျူဟာသစ်များ
ချမှတ်နိုင်စေသောစွမ်းရည်များကိုပါတိုးတက်စေပြီး ကျောင်းသားများ၏တိုးတက်မှုကို များစွာအထောက်အကူ ပြုစေသည်။ အကျိုးဆက်မှာ အကောင်းဆုံးသောညွှန်ကြားချက်များချမှတ်ပေးနိုင်သော ပိုမိုပျော်ရွှင်သည့် အပြုသဘောဆောင်သောဆရာများဖြစ်လာစေခြင်းဖြစ်သည်။ အောက်ပါနည်းလမ်းတို့်သည် သီတင်းပတ်အားလပ်ရက်များ၊ ရာသီလိ်ုက်ကျောင်းပိတ်ရက်ရှည်များတွင် ဆရာများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများကို မြှင့်တင်ပေးမည့်နည်းလမ်းများဖြစ်သည်။
ဆရာများအတွက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုနည်းလမ်းများ
Author Parker Palmer(1997) က “ပညာသင်ကြားပေးခြင်းသည် လူသားတို့၏ စစ်မှန်သောအခြားလှုပ်ရှားမှုများကဲ့သို့ တစ်စုံတစ်ယောက်၏အတွင်းပိုင်းမှကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ ထွက်ပေါ်လာသောအရာဖြစ်သည်” ဟုဆိုခဲ့ပါသည်။ ဆရာများသည် မောပန်းနွမ်းနယ်လွန်းသောအခါ၊ အာဟာရမပြည့်ဝသည့်အခါ၊ ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းများမရှိသည့်အခါ၊ အလုပ်တာဝန်များ ဖိစီးလွန်းနေသည့်အခါ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် အဆင်မပြေသည့်အခါ၊ ကျောင်းသားများကို ထိန်းသိမ်းရန်ခက်ခဲသည့်အခါ၊ အိမ်တွင်ချန်ရစ်မထားခဲ့နိုင်သောမိသားစုပြဿနာများရှိလာသောအခါ ဆရာများ၏ စွမ်းရည်များကို ဆုတ်ယုတ်စေပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထက်မြက်တက်ကြွမှုများကိုပါ ကျဆင်းစေသည်။
ဆရာများသည် ကျန်းမာကြံ့ခိုင်သောခန္ဒာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုမျိုးရှိမှသာ လုပ်ငန်းခွင်တွင် တိုးတက်ကောင်းမွန်သော အမြင်စူးရှမှုများကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပေမည်။ ညနေ ၇ နာရီနောက်ပိုင်းတွင် အလုပ်မလုပ်တော့ဘဲ အနားယူခြင်း၊ တစ်ပတ်လျှင်တစ်ရက် အနားယူခြင်းစသည်ဖြင့် အလုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ တိကျသော အလုပ်ချိန်ဇယားချမှတ်ထားပြီး ထိုဇယားအတိုင်း အတိအကျလိုက်နာခြင်းမျိုးပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆရာသစ်များအတွက်မူ အစာကိုအချိန်ယူ၍ စနစ်တကျစားရန်၊ ကာယလေ့ကျင့်ခန်းယူရန်၊
ပို၍အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိကြောင်း သိရှိထားသင့်သည်။
ဆရာတစ်ယောက်အဖို့ တစ်နေ့တာတွင် မိမိစိတ်ပါဝင်စားရာပြုလုပ်ရန် သို့မဟုတ် ၀ထ္ထုတစ်အုပ်ဖတ်ခြင်း၊ ရေနွေးနွေးဖြင့်စိမ်ချိုးခြင်း၊ မွေးထားသောခွေးကလေးများနှင့်ဆော့ကစားခြင်း စသည့်စိတ်အပန်းဖြေစရာများကို ပြုလုပ်နိုင်ရန် အချိန်တို့အပြင် ၀ါသနာပါရာတစ်စုံတစ်ခု ပြုလုပ်ခြင်းတို့အတွက် အချိန်ရအောင်ယူသင့်သည်။ နေ့စဉ်စွမ်းအင်သစ်များကို ပြန်လည်မွေးဖွားစေခြင်းဖြင့် စာသင်ခန်းတွင်းတွင် ဟာသ၊ ဖန်တီးမှုနှင့် ပညာသင်ယူရန်တွန်းအားပေးနိုင်မှုစသောစွမ်းရည်တို့ တိုးတက်စေမည်ဖြစ်သည်။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ အိမ်တွင်းရေးပြဿနာများကို အိမ်တွင်ချန်ထားခဲ့ခြင်းတို့သည် ဆရာကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ရန် မရှိ်မဖြစ်လိုအပ်သော အရာများဖြစ်သည်။
ဆရာသည်ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီအကြောင်းသိအောင်နေ့စဉ်အာရုံစိုက်၍ အားထုတ်ရသည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ တင်ပြမှုများကို ထောက်ခံမှုရော၊ ဆန့်ကျင်မှုပါမကျန် နားထောင်ရပြန်သည်။ ထို့ပြင် အခြားပြဿနာများကို လုပ်ငန်းခွင်ထဲသို့ မရောယှက်စေရန်လည်း ထိန်းသိမ်းရပြန်သည်။ တစ်ကိုယ်ရေလွတ်လပ်မှုကို စောင့်ရှောက်ရသည့်ပြင် ဆက်ဆံရေးကောင်းများကိုပါ ကျောင်းတွင်တည်ဆောက်နေရခြင်းကြောင့် ဆရာတစ်ယောက်အတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ရန်အတွက် ကောင်းမွန်သောကျန်းမာရေးရှိရန် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပေသည်။
ဆရာများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုနည်းလမ်းများ
ကျောင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများက ဆရာများအတွက် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အရည်အသွေးများကို တိုးတက်စေရန်ပံ့ပိုးပေးသောအခါ ဆရာအများစုက သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်သစ်တစ်ခု ရနိုင်သော အစီအစဉ်မျိုးကိုသာဆန္ဒရှိကြသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုပညာကျွမ်းကျင် တိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်သည် ဆရာတစ်ယောက်၏ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအပေါ် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေသင့်ပါ။ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေရေးသည် ပညာသင်နှစ်တလျှောက် အနည်းငယ်စီ ပျော်ရွှင်စွာ လေ့လာသင်ယူခြင်း၊ သင်ခန်းစာများကို ပြန်လည်နွှေးခြင်း၊ ကျောင်းရက်ရှည်ပိတ်ရက်များတွင် သင်တန်းတက်ခြင်းမျိုးသာဖြစ်သင့်သည်။
အကြံပြုနိုင်သည့် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေရေးနည်းလမ်းများမှာ ပညာရေး website များကိုလေ့လာခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းခြင်း၊ ပညာရေးစာစောင်များကို လေ့လာခြင်း၊ ကျောင်းတွင်ဖြစ်စေ အခြားနေရာများတွင်ဖြစ်စေ လုပ်ငန်းတူများနှင့်အကြံဉာဏ်များ
ဖလှယ်ခြင်း၊ ပညာရေးညီလာခံများတက်ရောက်ခြင်း၊ Online သင်တန်းများတက်ရောက်ခြင်း၊ ပညာရေးဆိုင်ရာနည်းပညာများဗဟုသုတများကို ဆောင်းပါးများရေးသားခြင်း၊ ဆရာမှတ်တမ်းများကဲ့သို့သော အကြံပေးစာအုပ်များကိုဖတ်ရှုခြင်းတို့ဖြစ်ကြသည်။ ၄င်းတို့အနက်မှ မိမိစိတ်ပါဝင်စားရာကို
ပုံမှန်လေ့လာခြင်းဖြင့် ဆရာတစ်ယောက်သည် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်ဘဲ မိမ်ိကိုယ်ကို အစဉ်အမြဲတိုးတက်မှုရှိနေအောင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Posted by Han Kyi at 8:47:00 pm
ဂန္ဓီကြီးရဲ့ ဖိနပ်တစ်ရံ . . .
ဒီနေ့ မပျော်ပါ . . .
အသိဉာဏ် အလင်းခလုတ်ဖွင့်တဲ့ ဘာသာရပ်တွေ . . .
အဆင်ပြေချောမွေ့သော စာသင်ခန်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု တည်ဆေ...
လိုက်မလားခင် . . .
ဆယ်ကျော်သက်များကို ပညာသင်ယူစေရန် ဆွဲဆောင်ခြင်း . ....
နေ့တွေထဲက နေ့တစ်နေ့. . .
ဘာကြောင့် blog ရေးဖြစ်နေတာလဲ ?
ဆရာများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင...
ဦးသုမောင်မှ ဆင့်ပွားအတွေး. . .
Windows အတွက်အသုံးဝင်သော short cut များ
လည်ပင်း ခွဲခံရတော့မယ် . . .
မိုးတွေရွာနေပြီ. . .
တစ်ခုသော တစ်ညနေ . . .
ပကတိမိုး . . .
Folder Option ပြန်ဖော်ရအောင် . .
ရင်ထဲကလည်း အညာသား . . .
သမုဒယ . . .
ဗေဒါလမ်း . . .
101 Suite . . .
ကိုယ့်နောက်ကွယ်မှာ . . .
တွေးမိတယ် . . .
စလေဦးပုည၏ တေးထပ်များ ၂
ကလေးကဗျာ . . .
တိုက်ရိုက်မွေးစားစာလုံးများ . . .
Basic Grammar for High School Students ( Gender )
သရုပ်မပျက်တဲ့ ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှု . . .
တေးထပ်ဘုရင် စလေဦးပုည၏ တေးထပ်များ . . .
စစ်သူရဲ . . .
ဘယ်သူ့ကို အရင်ဖွင့်ပေးမလဲ . . .
Basic Grammar Course for High School Students